Toerana misy anao: Home
Serivisy fanamboarana OEM / ODM
PUAS dia nifantoka tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny haitao famaritana horonan-tsary avo lenta, algorithma fanodinana sary, famolavolana faritra miharo, famolavolana fitaovana, famolavolana firafitry ny endrika PTZ.
Miaraka amin'ny sehatry ny fikarohana sy fivoarana siantifika mahery vaika, manome rafitra rafi-pikatrarana sary HD izahay, rafi-panabeazana, ary vahaolana momba ny rafitra video terminal lavitra HD. Miezaha ho tonga mpitarika manerantany amin'ny fikarohana & fampiroboroboana ny sary amin'ny sary HD sy ny terminal terminal.
PUAS dia manana R & D fahaizana avy amin'ny rindrambaiko ho an'ny hardware, afaka manome serivisy voatokana. Miorina amin'ny traikefa momba ny fikarohana sy fivoaran'ny fakan-tsary PTZ, ny PUAS dia hanangana vahaolana amin'ny 4K sy ny teknolojia teknolojia 3CCD.
Raharaha vokatra namboarina
Tsy misy afa-po, miandrasa ... na Mifandraisa aminay!
Fandraisana an-tsary PTZ
Konferansa PTZ Kits
Fihaonambe PTZ Camera
Fandefasana sy fandefasana mivantana
Mifantoha amin'ny WeChat